အနာဂတ်သို့ပြန်သွားရန် - ၂၀၀၉ ခုနှစ် - အပျိုဖော်ဝင်ရန်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်စီစဉ်ထားသောစည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာယူဆချက် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိသဘာ ၀
နောက်ကျောအနာဂတ်ကို: အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (2009) ကိုအဆင်ပြေအောင်အဆိုပါစည်းရုံးရေး-Active ယူဆချက်
Horm ပြုမူနေ။ 2009 May;55(5):597-604. doi: 10.1016/j.yhbeh.2009.03.010.
Schulz KM1, Molenda-Figueira HA, Sisk CL.
1စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Developmental Psychobiology အစီအစဉ်, ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်, Denver Anschutz ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းပရဝုဏ်, Aurora, CO 80045, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Phoenix မြို့, Goy, Gerall နှင့်လူငယ်ပထမဦးဆုံး 1959 အတွက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများတွင်ဟော်မုန်း-မောင်းနှင်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏စည်းရုံးရေး-Active အယူအဆအဆိုပြုခဲ့သည်။ မူရင်းအယူအဆအစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတပုလ်အတွက် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းကိုထိတွေ့ posited နှင့်လူကြီးအတွက်ဟော်မုန်းမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု programming, အာရုံကြောဆားကစ် defeminizes ။ ဤသည်အယူအဆဟာ perinatal ကာလ gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းဖို့လုပျသငျ sensitivity ကိုတစ်ဦးအချိန်ကြောင်းသရုပ်ပြစမ်းသပ်ချက်များစွာသောလူမှုတ်သွင်းထားပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အခြားသူများထံမှမကြာသေးမီအလုပ်အပြုအမူ၏ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းစည်းရုံးရေးဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်သမျှသောအတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအချိန်-frame ရဲ့တစ်ဦးပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန်ချက်ချင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် perinatally စတင်နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အဆုံးသတ်ကြောင်းအထီးမိတ်လိုက်အပြုအမူ၏ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုအဖွဲ့အစည်းအတွက်တစ်ခုတည်းအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး postnatal အထိခိုက်မခံကာလ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေအထောက်အထားကိုတင်ပြ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် Active / အဖွဲ့အစည်းအယူအဆ၏မူလရေးဆွဲရေးနှင့်ကိုက်ညီသော်လည်း, သိသိသာသာ "အစောပိုင်း" ဖွံ့ဖြိုးရေးပါဝငျသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆတွေကိုတိုးချဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးအပြုအမူတွေလည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုအဖွဲ့အစည်းကိုခံယူနှင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ modulates ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုတင်ပြ။ လူ့ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဆိုပါသက်ရောက်မှုလည်းအထူးသဖြင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များလူသားတွေအတွက် pubertal အချိန်ကိုက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ psychopathology အကြားအသင်းအဖွဲ့အခြေခံအချက်များ elucidate ဖို့ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်ရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Phoenix မြို့, Goy, Gerall နှင့်လူငယ်တို့အားဖြင့် 1959 မှတ်တိုင်စက္ကူပထမဦးဆုံးဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ (မှာရှိတဲ့ဟော်မုန်း-မောင်းနှင်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏စည်းရုံးရေး-Active အယူအဆဖြစ်လာခဲ့သည်သောအရာကို positedဖီးနစ် et al ။ , 1959) ။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေမူဘောင်များတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်အစောပိုင်း postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပုလ်စဉ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းအတွက်ယာယီမြင့်တက်ပြီးဣတ္အာရုံကြော phenotype ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမျိုးသမီးရလဒ်များကိုအတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏မရှိခြင်းနေစဉ်အမျိုးသားများအတွက်အာရုံကြောဆားကစ် defeminizes ။ အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်း gonadal ရငျ့ပေါ်၌ testicular နှင့်သားအိမ်ဟော်မုန်းအထူးသဖြင့်လူမှုရေးအခင်းအကျင်းအတွက်လိင်-ပုံမှန်အပြုအမူ၏စကားရပ်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ယခင်ကလိင်မတူညီဆားကစ်အပေါ်ပြုမူ။ အဆိုပါ 1960-70s အတွက်သုတေသနအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်နှောင်းပိုင်းတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဟော်မုန်း-မှီခိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်အစောပိုင်းမွေးကင်းစကလေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တစ်ဦးအလုပျသထိခိုက်မခံတဲ့ကာလ (ဖော်ထုတ် Baum, 1979; ဝေါ်လဲန်နှင့် Baum, 2002) ။ ထို့ကြောင့်မူလကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းတစ်ခုအစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုအထိခိုက်မခံကာလအတွင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံစုစည်းနှင့်အပျိုဖော်ဝင်စဉ်နှင့်လူကြီးသို့အပြုအမူကိုသက်ဝင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသက်ရောက်မှုအကြား dichotomy ၏စိတ်ကူးအတိတ် 50 နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အဆိုပါ 1970s မှာတော့ဖြစ်သူ Scott နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ, ခွေးအတွက်အထိခိုက်မခံကာလနှင့်လူမှုရေးပူးတွဲမှုအပေါ်သူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ (ကနေဆင်းသက်လာတဲ့မူဘောင်အာရုံကြောစနစ်၏တိုးတက်သောအဖွဲ့အစည်းအတွက်မျိုးစုံအထိခိုက်မခံကာလ၏တည်ရှိမှုတစ်ခုသီအိုရီအခြေခံပေးအပ်Scott et al ။ , 1974) ။ အာနိုးနှင့် Breedlove စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသက်ရောက်မှုအကြားခြားနားအမြဲရှင်းလင်းပြတ်သား-ဖြတ်မရဖြစ်ပြီး, စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှုများအတွက်အလားအလာ (အစောပိုင်းအာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုကန့်သတ်မထားဘူးကြောင်းကို၎င်း 1980s အတွက်စောဒကတက်အာနိုးနှင့် Breedlove, 1985). Scott (1974) အမူအကျင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထိခိုက်မခံကာလကိုလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ချ, နှင့် "လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုများအတွက်အခြားသိသာအရေးပါကာလလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုခုကိုအောင်မြင်စွာသို့မဟုတ်မအောင်မြင်ဖွဲ့စည်းသောအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ဖြစ်ပါတယ်" အဲဒီမှနျးဖို့သှားခဲ့ ကာလအချိန်မှာဒီအခိုင်အမာများအတွက်အနည်းငယ်သာပင်ကိုယ်မူလအခြေခံရှိခဲ့သော်လည်း။ ဤစာတမ်းအတွက်ကျနော်တို့ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်သောဦးနှောက်၏ပြုပြင်မှပြောပြတယ်အထူးသကဲ့သို့, စည်းရုံးရေး-Active အယူအဆ၏နောက်ထပ်သနျ့တောင်းဆိုလုသောငါတို့ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အခြားသူများထံမှအလုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ပြုပြင်လျှက်အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်, အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းအားဖြင့်တစ်စက္ကန့်အချိန်ဖွဲ့စည်းကြောင်း။ ညွှန်ပြသည့်အမူအကျင့် data တွေကိုအကျဉ်းချုပ် ဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းဤဒုတိယလှိုင်းပေါ်မှာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လိင်အစောပိုင်းအာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းမတူညီခဲ့ဆားကစ် refines ။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ perinatal ကာလကနေခွဲထုတ်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းအားဖြင့်ဦးနှောက်၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦး discrete အထိခိုက်မခံကာလဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမ၏မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ တတိယ, ငါတို့သားအိမ်ဟော်မုန်းအမျိုးသမီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းတွင်တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍသောသက်သေအထောက်အထားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအများစုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးအပြုအမူအပေါ်ဆယ်ကျော်သက် testicular ဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်အာရုံစိုက်ပေမယ့်, ဒီအဓိကအား Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုအပြုအမူအဖှဲ့အစညျး၏ဧရိယာ၌ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားသုတေသနမညီမျှမှုတစ်ခုရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ pubertal ဟော်မုန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအာရုံကြော circuitry စုစည်းနှင့်ဟော်မုန်း-မှီခိုနှင့်အာရုံကြောဆားကစ်၏အတှေ့အကွုံ-မှီခိုအဖွဲ့အစည်းယန္တယားကိုနှိုင်းယှဉ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာယန္တရားများအချို့ကိုဆွေးနွေးပါ။
တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်ဆီးရီးယားဟမ်းစတားအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့အထီးလူမှုရေးအပြုအမူတွေ၏နံပါတ် pubertal ဟော်မုန်းကစီစဉ်နေကြသည်တည်စေပြီ။ လူကြီးအတွက်လူမှုရေးအပြုအမူတွေ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးမှ testicular ဟော်မုန်းများ၏အလှူငွေအကဲဖြတ်ရန်, ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ perinatal ကာလအပြီးတွင်နှင့်အပျိုဖော်ဝင်စတင်ခြင်းမပြုမီ, ဝှေးစေ့ကှာသောသူဟမ်းစတားကနေဖယ်ရှားထားသည့်အတွက်တစ်ဦးစမ်းသပ်ပါရာဒိုင်း, ဆိုလိုသည်မှာအလုပ်ပါတယ်။ လူကြီးများတွင် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးခြင်း, 1-2 ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးလက်ခံအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်တစ်ခုကျူးကျော်အထီးနှင့်အတူလူမှုရေး interaction ကလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ဤအဘာသာရပ်များ၏အပြုအမူကြောင့်သင်းနှင့်ဟော်မုန်းအစားထိုးလူကြီးအတွက်ဖြစ်ပေါ် မှလွဲ. အလားတူရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာ testicular ဟော်မုန်းအတွက် pubertal မြင့်ပြီးနောက်, ကုသဖြစ်ကြောင်းအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ ဤအစမ်းသပ်ချက်တှငျကြှနျုပျတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အဆင့်ဆင့်, ရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်နံ-marking အားလုံးယောက်ျား၏အပြုအမူမှနှိုင်းယှဉ်ပါက, testicular ဟော်မုန်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုစဉ်အတွင်းပျက်ကွက်နေကြသည်သောယောက်ျား (အပျိုဖော်ဝင်မတိုင်မီ castrated ဆိုလိုသည်မှာယောက်ျား) တွင်လျှော့ချဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ endogenous testicular ဟော်မုန်း (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုစဉ်အတွင်းအပျိုဖော်ဝင်ပြီးနောက် castrated (ဆိုလိုသည်မှာယောက်ျားသည်စည်းဝေးကြ၏ရသောSchulz et al ။ , 2006a; Schulz et al ။ , 2004a; Schulz နှင့် Sisk, 2006) ။ လူကြီးအတွက် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏တောင်မှတစ်ကြာရှည်ကာလ (အပျိုဖော်ဝင်မတိုင်မီ castrated ယောက်ျားအတွက်အပြုအမူပုံမှန်ပျက်ကွက်Schulz et al ။ , 2004a) ။ ထို့အပြင်အပျိုဖော်ဝင်မတိုင်မီ castrated အထီးဟမ်းစတား, လူကြီးအတွက် estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်းနဲ့ကုသနှင့်အထီးနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးလူကြီးအတွက် castrated အထီးလုပ်ပေးထက် lordosis ယူဆဖို့တိုတောင်းအောင်းနေချိန်ကိုပြသ (Schulz et al ။ , 2004a) ။ ထို့ကြောင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းဟော်မုန်းအထီးလူမှုရေးအပြုအမူတွေ၏နောက်ဆက်တွဲဟော်မုန်း activation မြှင့်တင်ရန်နှင့်လူကြီးအတွက်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု masculinize နှင့် defeminize နှစ်ဦးစလုံး testicular, perinatal ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုစဉ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းထိတွေ့၏သူတို့အားအလားတူထွက်ပေါ်လာ။ သည်အခြားဓါတ်ခွဲခန်းကနေအစီရင်ခံစာများ (သစ်ပင် shrews အတွက်အထီး marking နယ်မြေရနံ့အပေါ်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း gonadal ဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှုများအတွက်အထောက်အထားများနှင့်ဆင်တူအမျိုးအစားများသည်Eichmann နှင့် Holst, 1999အထီးကြွက်များတွင်), ကျူးကျော် (Shrenker et al ။ , 1985) နှင့်တက်လာတယ်, (Lumia et al ။ , 1977), နှင့်အထီးကြွက်များတွင်တိုက်ပွဲများ play (Pellis, 2002).
ပွင့်လင်းသောလယ်၌ locomotor လှုပ်ရှားမှုပမာဏကိုစိုးရိမ်စိတ်, လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုများသို့မဟုတ်ကြွက်များတွင်စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုအညွှန်းကိန်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ပွင့်လင်းသောလယ်နယ်ပယ်တွင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်လွင်ပြင်အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားဖို့ပို anxiogenic ကြောင်းကိုညွှန်ပြ, အမျိုးသမီးကြွက်များထက်လျော့နည်း ambulate ။ Pubertal testicular ဟော်မုန်းလူကြီးအတွက်ယောက်ျားအတွက်တိုးမြှင့်လူနာတင်ယာဉ်အတွက်အပျိုဖော်ဝင်ရလဒ်များကိုစတင်ခြင်း (အနည်းဆုံးသင်းသောကွောငျ့, ပွင့်လင်းသောလယ်လူနာတင်ယာဉ်အတွက်ဒီလိင်ခြားနားချက်စည်းရုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် Slob, 1988; ဒါပေမယ့်လည်းတွေ့မြင် Stewart နဲ့ Cygan, 1980) ။ အလားတူပင်အထီး-အထီးလူမှုရေး interaction ကယောက်ျားအတွက်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု anxiogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်း, တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တွင်လျှော့ချနေကြသည်။ ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်၏ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု (အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးလေနှင့် Kellogg, 1989) ။ အပျိုဖော်ဝင်၏အချိန်ကာလအတွင်း (သို့သော်မဟုတ်လူကြီးအတွက်) testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး (လူကြီးအတွက်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးသက်ရောက် reinstates စဉ် Prepubertal သင်း, ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးသက်ရောက်၏ pubertal ပေါ်ပေါက်ရေးကိုကာကွယ်တားဆီးလေနှင့် Kellogg, 1990) ။ Gonadal ဟော်မုန်း (ထို benzodiazepine-ဂါဘမြို့သားအဲဒီ receptor ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုမှရှုပ်ထွေးတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲဖွငျ့ဤစိုးရိမ်ပူပန်-related အပြုအမူစုစည်းဖို့ပေါ်လာလေနှင့် Kellogg, 1991).
ပျမ်းမျှအားတွင်, ယောက်ျား Spatial သိမှတ်ခံစားမှု၏စမ်းသပ်မှုများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ထက်ပိုကောင်းလုပ်ဆောင်။ လူသားတွေအတွက် Spatial သိမှတ်ခံစားမှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု pubertal ဟော်မုန်းကစီစဉ်နိုင်ပါသည်။ ဒီအတှကျအထောကျအထား Spatial သိမှတ်ခံစားမှုအပျိုဖော်ဝင်မတိုင်မီစတင်ခဲ့ပြီး IHH နှင့်အတူယောက်ျား (လူကြီးအတွက်ဝယ်ယူကြောင်း idiopathic hypogonadotropic hypogonadism (IHH) နဲ့ယောက်ျားအတွက်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည့်အတွက်လေ့လာမှုကနေကြွလာHier နှင့် Crowley, 1982) ။ အဆုံးစွန်သောအုပ်စုတစ်စုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း pubertal gonadal ဟော်မုန်းပုံမှန်အဆင့်ဆင့်တွေ့ကြုံသော်လည်းယခင်အုပ်စု, အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ကာလအတွင်းပျံ့နှံ့နေတဲ့ gonadal steroids ၏အနိမ့်သို့မဟုတ်သိရှိနိုင်အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Spatial သိမှတ်ခံစားမှု (ကျန်းကျန်းမာမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှင့်လူကြီးအတွက်ဝယ်ယူ IHH နှင့်အတူလူတို့အားနှစ်ဦးစလုံး, pubertal steroids ထိတွေ့မဟုတ်ယောက်ျားအတွက်ချို့ယွင်းခဲ့သည်Hier နှင့် Crowley, 1982), အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း testicular ဟော်မုန်း၏ရှေ့မှောက်တွင် Spatial သိမှတ်ခံစားမှုအခြေခံ circuits များစုစည်းကြောင်းအကြံပြု။ လူ့ Spatial သိမှတ်ခံစားမှု၏နောက်ထပ်လေ့လာမှုအနည်းငယ်ပေမယ့်နာတာရှည်ကလေးဘဝအစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း adrenal အန်ဒရိုဂျင်၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင်မှဦးဆောင်ပြုလုပ်မွေးရာပါ adrenal hyperplasia တစ်မူကွဲတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဘာသာရပ်များပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားအမြိုးသမီးမြားကိုထပ် Spatial စွမ်းရည် (အပေါ် adrenal အန်ဒရိုဂျင်၏ pubertal စည်းရုံးရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြံပြုခြင်း, ကျန်းမာဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးကို virtual မောရစ်ရေဝင်္ (Spatial မှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးစမ်းသပ်) တွင်ပိုကောင်းဖျော်ဖြေMueller et al ။ , 2008) ။ Spatial မှတ်ဉာဏ် hippocampus-မှီခိုဖြစ်ပြီး, hippocampus အတွက် Synaptic plasticity pubertal အန်ဒရိုဂျင်ကစီစဉ်ခံရဖို့ပုံရသည်။ အန်ဒရိုဂျင် receptor activation အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းပိတ်ဆို့လျှင်အထူးလူကြီးတစ်ဦး tetanizing လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် CA1 အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါအတွက်အပျိုဖော်ဝင်ရလဒ်များကိုစဉ်အတွင်းအန်ဒရိုဂျင် receptor ၏ activation, ရေရှည်အလားအလာ (လူကြီးတစ်ဦး tetanizing လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ဖြစ်ပေါ်သော်လည်းHebbard et al ။ , 2003) ။ ဤရလဒ်သည် pubertal testosterone ဟော်မုန်း Spatial သိမှတ်ခံစားမှုအပါအဝင် hippocampus-မှီခိုသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်, စည်းရုံးနိုင်သောအလားအလာယန္တရားသည်။
လူမှုရေးအပြုအမူတွေ၏ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုရငျ့နှစျယောကျဇာတ်စင်မော်ဒယ်
pubertal testicular ဟော်မုန်းအထီး-ပုံမှန်အပြုအမူတစ်ခုကျယ်ပြန့်စည်းရုံးကြောင်းသက်သေအထောက်အထား၏သဘောအရဆိုလျှင် Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ perinatal ကာလ Steroid တစ်မျိုး-မှီခို၏ဒုတိယလှိုင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သောအမူအကျင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နှစ်ဇာတ်စင်မော်ဒယ်အဆိုတင်သွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးခံရ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (စဉ်အတွင်းအာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းကိုSchulz နှင့် Sisk, 2006; Sisk et al ။ , 2003; Sisk နှင့် Zehr, 2005, ပုံ 1) ။ ဒုတိယလှိုင်းစဉ်အတွင်း pubertal ဟော်မုန်းပထမဦးဆုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြောဆားကစ်ကိုစုစည်းပြီး, ပြီးတော့သူတို့အဆားကစ်ကိုသက်ဝင်နေဖြင့်တိကျသောလူမှုရေးအခင်းအကျင်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်-ပုံမှန်အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးလွယ်ကူချောမွေ့။ ကျနော်တို့ perinatal အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ဦးသနျ့အဖြစ်ဟော်မုန်း-မောင်းနှင်ဆယ်ကျော်သက်အဖွဲ့အစည်းကရှုမြင်ကြသည်။ ဒါကအဘယျသို့ perinatal ဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းကနေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ် pubertal ဟော်မုန်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအဖွဲ့အစည်းအနေစဉ်အတွင်းပြုမူရာပေါ်မှာအလွှာဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်ပါသည်။ အဖှဲ့အစညျး၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအဆင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဟော်မုန်းမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်လူမှုရေးအရ-သက်ဆိုင်ရာအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုဆုံးဖြတ်ရန်ကြောင့်ကြာရှည်ခံတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲများအတွက်အာရုံကြောဆားကစ်ရလဒ်များ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုသနျ့စဉ်အတွင်း, အဖှဲ့အစညျးမြား၏ perinatal အဆင့်ရှိသူများနှင့်ဆင်တူသည်နောက်တဖန်ထွက်ပေါ်လာ။
အပြုအမူ၏ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုအဖွဲ့အစည်းအတွက်နှစ်ဦးကိုစင်မြင့်ပုံစံ။ အဆိုပါ perinatal နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကာလအတွင်းမှာ testosterone လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိတ်လိုက်အပြုအမူစည်းရုံး။ အဆိုပါ dashed line ကို testosterone ဟော်မုန်းဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အရိပ် approximates ...
ဟော်မုန်း-မှီခိုအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကာလဟော်မုန်းမှတိုးမြှင့် sensitivity ကိုနှစ်ခု discrete ကာလပါဝင်ပတ်သက်နေသလား? ကျနော်တို့ (sensitivity ကိုတစ်ပြတင်းပေါက် testicular ဟော်မုန်းကစီစဉ်ဦးနှောက်၏ကနဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုခွင့်နှောင်းပိုင်းမှသန္ဓေသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းကြွက်များတွင်ဖွင့်လှစ်သင်သိရဝေါ်လဲန်နှင့် Baum, 2002) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, က testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာချိန်မရှိခြင်း၏ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ reverse သို့မဟုတ် ameliorate ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟော်မုန်း-မှီခိုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ sensitivity ကိုတစ်ပြတင်းပေါက်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အဆုံးအားဖြင့် (သို့မဟုတ်နီးပါးဒါ) ပိတ်လုသောငါတို့အလုပ်ကနေသိသာဖြစ်ပါသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုရေးအပြုအမူတွေ (အပေါ်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်း၏Schulz et al ။ , 2004a) ။ အဘယ်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်၏ perinatal နှင့် peripubertal ပြတင်းပေါက် (ထပ်သောအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်ပုံ 1) ။ အဆိုပါ peripubertal window ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီ perinatal ဝင်းဒိုးကိုအနီးကပ်ပါသလား တနည်းအားဖြင့်, အ perinatal နှင့် peripubertal ပြတင်းပေါက်အာရုံကြောစနစ်၏ဟော်မုန်း-မှီခိုအဖွဲ့အစည်းကမှ sensitivity ကိုတစ်တစ်ခုတည်းကာလထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖို့လုံလောက်တဲ့ထပ်သလဲ? testosterone ဟော်မုန်း Secret အတွက် pubertal မြင့်တက်နှင့် putative ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို window ၏ဖွင့်ပွဲ၏အချိန်ကိုက်အကြားဆက်ဆံရေးကဘာလဲ? နောက်တစ်နေ့အပိုင်းဤမေးခွန်းများကိုအမှာစကားနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု gonadal ဟော်မုန်း Secret ဆွေမျိုးအတွက် pubertal မြင့်တက်၏အချိန်ကိုက်အရွယ်ရောက်လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်မည်သို့မည်ပုံ။ သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်
testicular ဟော်မုန်းမှ sensitivity ကို၏ Windows ကို
postnatal testosterone ဟော်မုန်းတိတ်ဆိတ်စွာတိုး၏အချိန်ကိုက်ဟာမွေးကင်းစကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကာလအတွင်း hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) ဝင်ရိုးနှင့် testosterone ဟော်မုန်း Secret ၏ endogenous လှုပ်ရှားမှုကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးအပြုအမူ၏ပုလ်နှင့် defeminization မောင်း။ ဒီထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, သို့သော်, HPG ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှု၏အချိန်ကိုက်စိတ်ပူပန်နှင့် testicular လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်ရသောကာလအတွင်းအသက်-range ကိုပြင်ပမှာစတင်လျှင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်လျှို့ဝှက်ချက်အလားတူစည်းရုံးရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်မှာအားလုံးတစ်စုံတစ်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ testicular မလဲ testosterone ဟော်မုန်းများ၏စည်းရုံးရေးလုပ်ရပ်တွေကိုမှ sensitivity ကို၏တိကျသော postnatal ပြတင်းပေါက်ရှိပါတယ်ရှိလျှင်, မည်မျှပြတင်းပေါက်တည်ရှိ? ယခင်သုတေသန (အပြုအမူစုစည်းဖို့ testosterone ဟော်မုန်းများအတွက်အလားအလာ sensitivity ကိုတစ်ပြတင်းပေါက် postnatal နေ့က 10 န်းကျင်ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းအလိုငှါအကြံပြုခြင်း, အစောပိုင်း postnatal ကာလတစ်လျှောက်လျော့ကျကြောင်းပြသဝေါ်လဲန်နှင့် Baum, 2002) ။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၏မွေးကင်းစကလေးများကာလကနေ sensitivity ကိုကွဲပြားတဲ့ဒုတိယ window ၏အဖွင့်ခြေတစ်လှမ်းရှိမရှိ၏သင့်လျော်သောစမ်းသပ်မှုသာမကြာသေးမီကကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းအချိန်-on နှင့် testosterone ဟော်မုန်း Secret နှောင်းပိုင်း pubertal တိုး (P10-19) ကာလအတွင်း postnatal နေ့က 10 အပေါ်အထီးဟမ်းစတား castrating, နှင့် (P29-29) မတိုင်မီ 48 နေ့ရက်ကာလအဘို့ testosterone- သို့မဟုတ်ကွက်လပ်ဖြည် silastic တောင့ implanting အားဖြင့် simulated ခဲ့ကြသည် သို့မဟုတ် (P63-82) အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ပြီးနောက်။ လူကြီးများတွင်နှစ်ဆယ်ရှစ်ရက်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်ကွက်လပ်လုံးလေးများ၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်အားလုံးယောက်ျား7ရက်အကြာတွင်တစ်ဦးလိင်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းမိတ်လိုက်အပြုအမူလှုံ့ဆော်ဖို့ testosterone ဟော်မုန်းလုံးလေးများနှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် testosterone ဟော်မုန်း-မှီခိုအပြုအမူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ထူးခြားတဲ့အထိခိုက်မခံကာလ၏အဖွင့်ခြေတစ်လှမ်းလျှင်, အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ကာလအတွင်း testosterone ဟော်မုန်း implants လက်ခံရရှိသူတို့သာယောက်ျားအရွယ်ရောက်ပြီးသူ-ပုံမှန်မိတ်လိုက်အပြုအမူဖော်ပြရန်သငျ့သညျ။ ဒီခန့်မှန်းဆန့်ကျင်, သို့သော်ကျနော်တို့ Schulz et al (လူကြီးအတွက်မိတ်လိုက်အပြုအမူ facilitated စောစောနှင့် On-အချိန် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု, ဒါပေမယ့်မရနှောင်းပိုင်းတွင်ကုသမှုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ , ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာ ပုံ 2) ။ ထို့အပြင်အများစုထိရောက်စွာ facilitated အစောပိုင်း testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိတ်လိုက်အပြုအမူ, ကြိုတင်အပျိုဖော်ဝင်မှ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုအပြုအမူအဖှဲ့အစညျး၏ယခင်လေ့လာမှုများကထောက်ခံနေတဲ့တွေ့ရှိချက် (Coniglio နှင့် Clemens, 1976; Eaton, 1970) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဟာမွေးကင်းစကလေးများကာလကနေကွဲပြား testosterone ဟော်မုန်း-မှီခိုအပြုအမူအဖွဲ့အစည်းအတွက်တစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ကာလမဟုတ်ပေမယ်မဟုတ်ဘဲ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဖွယ်ရှိခုနှစ်နှောင်းပိုင်း perinatally စတင်ခဲ့သည်နှင့်အဆုံးသတ်ကြောင်းအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မခံတဲ့ကာလ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်) 1: ဤတွေ့ရှိချက်ကိုသရုပ်ပြ neurobehavioral ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာတိုးချဲ့ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်; နှင့် 2) အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိတ်လိုက်အပြုအမူ၏ဤ postnatal ပြတင်းပေါက်အစီအစဉ်များစကားရပ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်း Secret ၏အချိန်ကိုက်။ testosterone ဟော်မုန်းမှအစောပိုင်းကထိတွေ့မှုနောက်ပိုင်းမှာထိတွေ့မှုမထက်အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤဒေတာ (testosterone ဟော်မုန်းများ၏စည်းရုံးရေးလုပ်ရပ်တွေကိုမှ sensitivity ကိုလျော့ကျလာ၏ကြီးမားသော postnatal ပြတင်းပေါက်များပါဝင်သည်ဖို့ 2-ဇာတ်စင်မော်ဒယ်ပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးခံရပါပြီပုံ 3) ။ အရေးကြီးတာက, ဟော်မုန်း-မှီခိုအဖှဲ့အစညျး၏မူလနှစ်ခုဇာတ်စင်မော်ဒယ်နေဆဲသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အဆင့် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းမှ sensitivity ကို၏ကွဲပြားပြတင်းပေါက်များကသတ်မှတ်ပေမယ့်အစားမှ sensitivity ကိုလျော့ကျလာတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာ postnatal ပြတင်းပေါက်အတွင်းမြင့်မားသောဟော်မုန်း Secret ၏နှစ်ခုကာလအားဖြင့်မဟုတ် steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိတ်လိုက်အပြုအမူအပေါ် On-အချိန်စောစောပိုင်း၏ဆိုးကျိုးများ, နှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကုသမှု (အလွတ်သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်း-ဖြည့်တောင့) ။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များကြိုတင်အပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းမှလူကြီးအတွက်ကုသ testosterone ဟော်မုန်းရှိကြ၏။ အစောပိုင်းနှင့် On-အချိန်ဆယ်ကျော်သက် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု, ...
On-အချိန်စောစော၏ဆိုးကျိုးများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏ခြုံငုံတွေ့ရှိချက်သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ပုံဥပမာများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိတ်လိုက်အပြုအမူအပေါ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုချက်ချင်းအောက်ပါအစပျိုးခဲ့ပေးထား ...
ဟော်မုန်း Secret အတွက် pubertal မြင့်တက်၏အချိန်ကိုက်အတွက်မူကွဲ၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ
လူသားတွေဟာ (pubertal ရငျ့၏အချိန်ကိုက်အတွက်သိသိသာသာပြောင်းလဲနိုင်သည်ပြDubas, 1991; သားရေလုပ်သမား, 1962), နှင့်ပုံမှန် pubertal အချိန်ကိုက်အတွက်သွေဖီနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် (အမျိုးမျိုးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် Graber, 2003) ။ ဥပမာ (အနုတ်လက္ခဏာခန္ဓာကိုယ် Self-image ကိုကနေအထိMcCabe နှင့် Ricciardelli, 2004) (စိတ်ကျရောဂါ၏တိုးလာဖြစ်ပွားမှုမှGe et al ။ , 2003; Graber et al ။ , 2004; Michaud et al ။ , 2006), စိုးရိမ်ပူပန် (Kaltiala-Heino et al ။ , 2003; Zehr et al ။ , 2007bdisorders စား၏), လက္ခဏာများ (Striegel-Moore က et al ။ , 2001; Zehr et al ။ , 2007a), (ရောဂါလုပ်ဆောင်သွားရန်Burt et al ။ , 2006; Celio et al ။ , 2006) နှင့်တိုးပွားလာအရက်နှင့်ဆေးလိပ်ကိုအသုံးပြုခြင်း (Biehl et al ။ , 2007; Bratberg et al ။ , 2007) ။ pubertal အချိန်ကိုက်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးရလဒ်တွေအတော်များများဟာ (ငယ်ရွယ်လူကြီးသို့ဆက်လက်ရှိမှသရုပ်ပြခဲ့ကြGraber et al ။ , 2004; Zehr et al ။ , 2007a).
လူသားတွေအတွက် pubertal အချိန်ကိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစိတ်ကျန်းမာရေးရလဒ်များအတွက်အရာသွေဖီနေဖြင့်အဆိုပါယန္တရားဖွယ်ရှိကိုယ်ထိလက်ရောက်နောက်ပိုင်းမှာတဦးတည်းရဲ့ရွယ်တူ, ဦးနှောက်အပေါ်တိုက်ရိုက်ဟော်မုန်းလုပ်ရပ်များ, နှင့်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ထူးခြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထက်အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းသို့မဟုတ်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအကြားရှုပ်ထွေးပြီးဆက်စပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တူအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်, လူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များ (Cavanagh, 2004; Ge et al ။ , 2002), မိဘအုပ်ထိန်းစတိုင်များ (Ge et al ။ , 2002), ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက် (Halpern et al ။ , 2007), နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များ (Ge et al ။ , 2001) အားလုံးစိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ် pubertal အချိန်ကိုက်များ၏သက်ရောက်မှုများပုံမှန်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ပုံ4ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့အမျိုးမျိုးအချိန်အချက်များမှာ pubertal ဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်များအားဖြင့်ကြားဖြတ်နိုင်ပါသည်ဘယ်လိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဟမ်းစတား၌အကြှနျုပျတို့၏တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးသီအိုရီပုံဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ ဟမ်းစတားမိတ်လိုက်အပြုအမူ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ gonadal ဟော်မုန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ကြားဖြတ် စောစော လူကြီးအတွက်အမူအကျင့်များပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်အတွက်ရလဒ်တွေကို။ gonadal ဟော်မုန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလူမှုရေးနှင့်သိမြင်မှုအပြုအမူတွေကိုစည်းရုံးကြောင်းပေးထား, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဟော်မုန်းထိတွေ့မှု၏အချိန်ကိုက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဆုံးဖြတ်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဖွယ်ရှိဆယ်ကျော်သက် gonadal ဟော်မုန်းကစီစဉ်သည်အခြားအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ generalizes ။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်း gonadal ဟော်မုန်းကစီစဉ်သည်ဤအပြုအမူများစွာကိုအဘို့, သာ gonadal ဟော်မုန်း၏ပြီးပြည့်စုံမရှိခြင်း၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုကိုငါသိ၏။ ကျနော်တို့ကအစောပိုင်းသို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်း pubertal အချိန်ကိုက်၏တိကျသောသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအောင်သေးသောအပြုအမူများ၏အသီးအသီးအမျိုးအစားများအတွက်ကြာချိန်ဒါမှမဟုတ်အထိခိုက်မခံကာလ၏သဘောသဘာဝကိုသိ (ဥပမာတိုးမြှင့်, လျော့ကျလာဒါမှမဟုတ်အထိခိုက်မခံကာလကိုဖြတ်ပြီးတန်းတူ sensitivity ကို) မရ ဤအအပြုအမူတွေ။ ပေးထားသောအပြုအမူများအတွက်အထိခိုက်မခံကာလမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအလွန်တိုတောင်းသောကြာချိန်သည်ဆိုပါကဥပမာ, နှောင်းပိုင်းတွင် pubertal စတင်ခြင်းလုံးဝအထိခိုက်မခံကာလပျောက်ဆုံးများ၏အန္တရာယ်ပြေး။ အဆိုပါအထိခိုက်မခံကာလ၏သဘောသဘာဝကိုလည်းအမူအကျင့်ရလဒ်များအပေါ် pubertal အချိန်ကိုက်များ၏သက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ဘူး။ gonadal ဟော်မုန်းမှ sensitivity ကိုတစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ကာလတစ်လျှောက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်နှောင်းပိုင်းတွင် pubertal စတင်ခြင်းဤမျှကာလပတ်လုံး pubertal Secret တကယ်တော့ sensitivity ကို၏ပြတင်းပေါက်ထပ်ပြုသကဲ့သို့ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ကာလကြာချိန်နှင့်သဘာဝစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးတာနဲ့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအပြုအမူအဖွဲ့အစည်းအပေါ် pubertal အချိန်ကိုက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအချက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ကြီးမားသည့်အလားအလာရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများ gonadal ဟော်မုန်း, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြားအပြန်အလှန်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအပြုအမူတွေအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုမောင်းမည်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအတွက်အခြေခံကွာဟချက်ကိုဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုအစောပိုင်းသို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်း pubertal စတင်ခြင်းသရုပ်ဖော်ထားတဲ့သီအိုရီပုံဥပမာကိုကွဲပြားခြားနားသောအချိန်အချက်များမှာဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ဖြတ်။ T က၏စည်းရုံးရေးလုပ်ရပ်တွေကိုမှ sensitivity ကိုအချိန်နှင့်အတူလျော့ကျသောကြောင့်, pubertal စတင်ခြင်း၏အချိန်ကိုက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ပေါ်စေမည် ...
အဘယ်အရာကို gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းကမှ sensitivity ကို၏ပြတင်းပေါက်ပိတ်?
ကျနော်တို့သေးမိတ်လိုက်အပြုအမူ၏ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုအဖှဲ့အစညျးအတှကျအထိခိုက်မခံကာလပိတ်အရာအားဖြင့်ယန္တရားမသိရပါဘူး, ဒါပေမဲ့တခြားလူသိများတဲ့အထိခိုက်မခံကာလ၏ဤအထိခိုက်မခံကာလရှယ်ယာ features တွေလျှင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း circuit ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသို့မဟုတ်စုစည်းပြီး၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ကိုအဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ (Bischof, 2007; Hensch, 2004; Knudsen, 2004) ။ အထူးသမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (testosterone ဟော်မုန်း၏ဥပမာရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်း) ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံများဆားကစ်စုစည်းပြီးထပ်မံပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုသူတို့ကိုယဉ်ဆပ်လိမ့်မည်။ gonadal ဟော်မုန်းအတွက် pubertal မြင့်တက်နှင့်အတူ concomitant အဆိုပါဟမ်းစတား medial amygdala အတွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး Synaptic ဆက်သွယ်မှုပြောင်းလဲမှုဥပမာအားဖြင့်, ပုံစံများ, (Zehr et al ။ , 2006) ။ dendrites, ကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် spinophilin ပရိုတိန်းတွင်ဤလျှောက်လျော့နည်းနောက်ဆုံးတွင်ထပ်မံ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုအဖွဲ့အစည်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ခြင်း, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအထိခိုက်မခံကာလအတွင်း testosterone ဟော်မုန်းအားဖြင့်သွေးဆောင်စည်းရုံးရေးအပြောင်းအလဲများကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အတွက်အပြောင်းအလဲများ (မြင်းကျား Finch အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Imprint များအတွက်အထိခိုက်မခံကာလ၏ပိတ်ပွဲနှင့်သီချင်းသင်ယူမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပြီBischof, 2003; Bischof, 2007; Bischof et al ။ , 2002) ။ ဟုတ်မဟုတ် MePD dendritic အကိုင်းအခက်များနှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအချိန်-မှီခိုလျှော့ချ testosterone ဟော်မုန်းများ၏စည်းရုံးရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်အထိခိုက်မခံကာလ၏ပိတ်ပွဲနှစ်ခုလုံးကိုဆုံးဖွတျခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲရောင်ပြန်ဟပ်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးသားအိမ်ဟော်မုန်းအားဖြင့်သွေးဆောင်အပြုအမူအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာအထီး testosterone ဟော်မုန်း-မှီခိုအပြုအမူအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုနောက်ကွယ်မှကျန်ရစ်ပေမယ့်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့ရုပ်ပုံထွန်းသစ်စသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ (အမျိုးသမီး-ပုံမှန် attribute တွေမြှင့်တင်ရန်), masculinize (အထီး-ပုံမှန် attribute တွေမြှင့်တင်ရန်) သို့မဟုတ် defeminize စဉ်အတွင်းအပြုအမူပေါ် မူတည်. သားအိမ်ဟော်မုန်း (အမျိုးသမီး-ပုံမှန် attribute တွေဖိနှိပ်) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမူအကျင့်။ ဥပမာအားဖြင့်, အစားအစာကို Guard ၎င်းတို့၏အစားအစာအရင်းအမြစ်ကိုခုခံကာကွယ်ဘို့ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ဟန်အနေအထားမဟာဗျူဟာများ (ပြသခြင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတူကြွက်များတွင်လိင် dimorphic အပြုအမူဖြစ်ပါသည်field et al ။ , 2004) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ovariectomy မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်သော်လည်းမွေးကင်းစကလေးသို့မဟုတ် pubertal ovariectomy သိသိသာသာပို "အထီး-ကဲ့သို့" ဖြစ်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာပွောငျးလဲ။ ထို့ကြောင့်ဤအချက်အလက်များကိုမွေးကင်းစကလေးများနှင့် / သို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းမှာသားအိမ်ဟော်မုန်းတက်ကြွစွာအစားအစာကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုယ်ဟန်အနေအထားမဟာဗျူဟာ feminize ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ထပ်မကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာ (pubertal estradiol ကြွက်များတွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်အချက်ပြမှုများမှစားသုံးမိတုံ့ပြန်မှု feminizes ကြောင်းပြသSwithers et al ။ , 2008) ။ mercaptoacetate နှင့်အတူကုသမှုဖက်တီးအက်ဆစ်ဓာတ်တိုးနှောင့်ယှက်မယ့်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုအထီးအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုအတွက်တိုးလာပေမယ့်အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူး, ကြွက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လူကြီးအတွက် Ovariectomy ဒီလိင်ခြားနားချက်မထိခိုက်ပါဘူး။ သို့သော်ကြိုတင်အပျိုဖော်ဝင်မှ ovariectomized ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီး (ဆိုလိုသည်မှာ, အစားအစာစားသုံးမှုတိုးမြှင့်) mercaptoacetate မှအထီးကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုပြသနှင့် prepubertal ovariectomy ၏ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအပျိုဖော်ဝင်၏အချိန်ကာလအတွင်း estradiol နှင့်အတူကုသမှုအားဖြင့်တားဆီးနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအစီရင်ခံစာများဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်၏အဖှဲ့အစညျးမှာသားအိမ်ဟော်မုန်းတစ်ခုတက်ကြွအခန်းကဏ္ဍမှထောက်ပြတာပါ။
အစားအစာကို Guard နှင့်စားသုံးမိအပြုအမူအပေါ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသားအိမ်ဟော်မုန်း၏အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲသက်ရောက်မှုမှမတူဘဲ, သားအိမ်ဟော်မုန်းမိတ်လိုက်အပြုအမူများ၏မျိုးစိတ်-တိကျတဲ့ defeminization နှင့်ပုလ်မောင်းထုတ်ရန်ပေါ်လာပါသည်။ အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား, prepubertal, ဒါပေမယ့် postpubertal မဟုတ်ခုနှစ်တွင် ovariectomy lordosis latency လျော့ကျခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်းကုသမှုကိုတုံ့ပြန်အတွက်ခြုံငုံ lordosis Duration တိုးပွါး, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသားအိမ်ဟော်မုန်းထိတွေ့မှု (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ lordosis အပြုအမူ defeminizes ကြောင်းအကြံပြုSchulz et al ။ , 2004b) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမူအကျင့် defeminization လည်း estradiol (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအပြုအမူ defeminization များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်သားအိမ်ဟော်မုန်းကြောင်းကိုညွှန်ပြ, prepubertal ovariectomy အောက်ပါဆယ်ကျော်သက် estradiol ကုသမှုအားဖြင့်အောင်မြင်နေသည်Schulz et al ။ , 2006b) ။ အရေးကြီးတာက, ဆယ်ကျော်သက် estradiol ကုသမှုအောက်ပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူ lordosis အပြုအမူများလျှော့ချရေး locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအထွေထွေတိုး၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်လာပါဘူး။ အမျိုးသမီးတို့သည် lordosis ကိုယ်ဟန်အနေအထားအတွက်စေ့စပ်မရကြသောအခါမယ့်အစား, သူတို့တက်ကြွစွာ (မသက်ဆိုင်ဆယ်ကျော်သက်ဟော်မုန်းကုသမှု, သူတို့ရဲ့အထီးမိတ်ဖက်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်Schulz et al ။ , 2006b) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသားအိမ်ဟော်မုန်းဟာ lordosis ကိုယ်ဟန်အနေအထားအတွက်စေ့စပ်သုံးစွဲအချိန်ကိုလျော့ချနေစဉ်ထို့ကြောင့်, ဤအချိန်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထက် Non-တိကျတဲ့ locomotor အပြုအမူဖြင့်အစားထိုးသည်။
ဒါကြောင့်သားအိမ်ဟော်မုန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီး lordosis အပြုအမူ defeminize, အီစထိုဂျင်-receptor ကမကထပြုခဲ့အပြုအမူ defeminization ကိုလည်း (ထို perinatal ကာလအထိခိုက်မခံကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြန်အလှန်ထင်ရစေခြင်းငှါနေစဉ်Clemens နှင့် Gladue, 1978; Coniglio et al ။ , 1973; Paup et al ။ , 1972; ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှု ဝေါ်လဲန်နှင့် Baum, 2002) ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း lordosis အပြုအမူ၏ estradiol-သွေးဆောင် defeminization ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးမျိုးပွားမှုအောင်မြင်မှုလူသိများမဟုတ်ပါဘူး။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေ lordosis အပြုအမူ၏ defeminization မျိုးဆက်ပွားအောင်မြင်မှုလွယ်ကူချောမွေ့သောအခြားအပြုအမူတွေ၏ estradiol-မှီခိုအဖှဲ့အစညျးအတှကျ Trade-off ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆယ်ကျော်သက်သားအိမ်ဟော်မုန်းထိတွေ့မှု (အထီးဟမ်းစတားအတွက်ဆယ်ကျော်သက် testicular ဟော်မုန်းထိတွေ့မှုအတှကျအသရုပ်ပြခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း, အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်လူမှုရေးကြီးစိုး / ကျူးကျော်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါSchulz et al ။ , 2006a; Schulz နှင့် Sisk, 2006) ။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ရန်လိုသည့်အပြုအမူ (ဥပမာလူသိများကြသည် Payne နှင့် Swanson, 1970) နှင့်ယခင်အလုပ် (လူမှုရေးအရကြီးစိုးအမျိုးသမီးလူမှုရေးအရလက်အောက်ခံအမျိုးသမီးထက်ပိုကြီးတဲ့အမှိုက်သရိုက်မှမွေးဖွားပေးကြောင်းအကြံပြုHuck et al ။ , 1988) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း estradiol အားဖြင့် lordosis အပြုအမူ၏ defeminization ယောက်ျားနှင့်အတူမိတ်လိုက် interaction ကများ၏ကြာချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပေမယ့်ထို့ကြောင့်အခြားအပြုအမူစနစ်များအဖွဲ့အစည်းကိုခြုံငုံမျိုးဆက်ပွားအောင်မြင်မှုသေချာပေမည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းအဖွဲ့အစည်းဆိုးကျိုးများလည်းကြွက်များမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Exogenous testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်ရေး (တောင်းနိုင်အောင်အပြုအမူ defeminizesBloch et al ။ , 1995) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမျိုးသမီးကြွက် ovariectomized testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးတွေအထိုင်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် display ကိုအောက်ခြေအဆင့်မီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်သားအိမ်ဟော်မုန်း (အပြုအမူအဖော်ရှာ masculinize ကြောင်းအကြံပြု, အမျိုးသမီး ovariectomized မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြီးနောက်လုပ်ပေးထက်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းယောက်ျားထက်မိန်းမဦးနှင့်အတူသိသိသာသာလျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းde Jong et al ။ , 1988) ။ ဆယ်ကျော်သက်သားအိမ်ဟော်မုန်းထိတွေ့မှု (မွေးကင်းစကလေး androgenized အမျိုးသမီးကြွက်များ၏မျိုးပွားမှုအပြုအမူအပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်: ထို့အပွငျကမွေးကင်းစကလေးများဟော်မုန်းပတ်ဝန်းကျင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုသားအိမ်ဟော်မုန်းအပြုအမူ masculinize သောအတိုင်းအတာဆုံးဖြတ်သည်ပုံde Jong et al ။ , 1988) ။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်မွေးကင်းစကလေး gonadal ဟော်မုန်းဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးအပြုအမူ၏အဖှဲ့အစညျး၏ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုကာလ၏ရှုပ်ထွေးပြီးအပြန်အလှန်သဘောသဘာမီးမောင်းထိုးပြခြင်း, ဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းပြုမူရာပေါ်အာရုံကြောအလွှာဟာပြောင်းလဲပစ်။
သားအိမ်ဟော်မုန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းအချို့သောအမျိုးသမီးအပြုအမူတွေကိုစည်းရုံး။ အဘယ်အရာကိုလျော့နည်းရှင်းပါတယ်မျိုးစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအချိန်မှတ်ဖြတ်ပြီးသားအိမ်ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်ချက်သေးကောက်ယူကြပြီမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သားအိမ်ဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှုဖို့ဆွေမျိုး sensitivity ကို, postnatal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သင်တန်းကျော်ကွဲပြားခြားနားသောရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်း (မွေးကင်းစကလေးများ) ovariectomy သေချာပေါက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသားအိမ်ဟော်မုန်းမဆိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖယ်ရှားပေးနှင့်ဟော်မုန်းအစားထိုး၏အချိန်ကိုက်စနစ်တကျမတူညီဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမူအကျင့်အဖွဲ့အစည်းကမှမွေးကင်းစကလေးများနှင့် pubertal သားအိမ်ဟော်မုန်းများ၏ထူးခြားသောပံ့ပိုးမှုများကိုဆုံးဖြတ်သည်မရနိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်ချက်ကောက်ယူမှီတိုင်အောင်ကျွန်တော်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူကြီးတစ်ဦးအမူအကျင့်အပေါ်သားအိမ်ဟော်မုန်းများ၏စည်းရုံးရေးလုပ်ရပ်တွေကိုများအတွက်အထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံကာလရှိမရှိသိကြမည်မဟုတ်။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ဟော်မုန်း-မှီခိုအဖှဲ့အစညျး၏ Neurobiological ယန္တရားများ
ကျနော်တို့ဒါဝေးကိုအဓိကအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအာရုံကြောဆားကစ်၏ Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း-မှီခိုအဖှဲ့အစညျးအတှကျဆွဲဆောင်မှုအမူအကျင့်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ ဆယ်လူလာ level မှာ, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသောအရာကိုဖြစ်ရပ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အာရုံကြော circuit ကိုဖွဲ့စည်းပုံပုံသှငျးဖို့ pubertal ဟော်မုန်းအားဖြင့် modulated နေကြသနည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မဟုတ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းက perinatal အဖွဲ့အစည်းကနေစဉ်အတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအခြေခံကြောင်းတူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအများအပြားကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း, pubertal ဟော်မုန်းဆဲလ်နံပါတ်နှင့်ဆဲလ်အုပ်စုကိုအသံအတိုးအကျယ်, ဆဲလ်အသေခံ, ဖြူသောကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အပါအဝင်ဤဖြစ်စဉ်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကဆဲလ်နံပါတ်နှင့်ဆဲလ်အုပ်စုကိုပမာဏ၏ gonadal ဟော်မုန်းမော်ဂျူဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphisms ၏တက်ကြွပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အလားအလာယန္တရား (ကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိAhmed က et al ။ , 2008) ။ ဒီလေ့လာမှုကတဦးတည်းကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာအမျိုးသမီး-တဖက်သတ်ဆဲလ်အုပ်စုတစ်စုသည် hypothalamus (AVPV) ၏ anteroventral periventricular နျူကလိယနှင့်နှစ်ဦးကိုအထီး-biased ဆဲလ်အုပ်စုများသည် preoptic ဧရိယာ (Sdn) ၏လိင် dimorphic နျူကလိယကို၎င်း, medial amygdala အပေါ်အာရုံစူးစိုက် ။ အဆိုပါဆဲလ်မွေးနေ့အမှတ်အသား bromodeoxyuridine (BrdU) ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူ AVPV, Sdn နှင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းမွေးဖွားခဲ့ကြောင်း medial amygdala အတွက်ဆဲလ်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့အမျိုးသမီးထက်အထီး Sdn နှင့် medial amygdala ပိုမိုများပြားခဲ့ကြသော်လည်း BrdU-immunoreactive ဆဲလ်တွေ, ယောက်ျားမှနှိုင်းယှဉ်ပါကအမျိုးသမီး၏ AVPV ပိုမိုများပြားကြ၏ BrdU ဆဲလ်တွင်ဤလိင်ကွဲပြားမှုဆဲလ်အုပ်စုကို volume ထဲမှာလိင်ကွဲပြားမှု paralleled ။ Prepubertal gonadectomy လူကြီးအတွက် BrdU-immunoreactive ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုဖျက်သိမ်းနှင့်ဆဲလ်အုပ်စုကို volume ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအတွက်ရလဒ်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, prepubertal ovariectomy AVPV BrdU ဆဲလ်နဲ့ volume လျှော့ချပေမယ့် Sdn ထိခိုက်စေခြင်းနှင့် BrdU ဆဲလ် amygdala မဟုတ်ခဲ့သလဲ, prepubertal သင်းလျှော့ချ BrdU ဆဲလ်နှင့် Sdn ၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့် medial amygdala, ဒါပေမယ့် AVPV ဘူး။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်တချို့က BrdU ဆဲလ်တွေကိုလည်းအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းလိင် dimorphic ဒေသများမှဆက်ပြောသည်ဆဲလ်တွေအလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံကြောဆဲလ်များနှင့် glial ဆဲလ်သို့ခွဲခြားကြောင်းညွှန်ပြ, NeuN သို့မဟုတ် GFAP ဖြစ်စေထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် pubertal ဟော်မုန်းတစ်ခု sex- နှင့်ဦးနှောက်ဒေသ-မှီခိုထုံးစံ၌လိင် dimorphic ဆဲလ်အုပ်စုများအတွက်, ဤလမ်းအတွက်ဆဲလ်ပြန့်ပွားသို့မဟုတ်ရှင်သန်မှုဖြစ်စေ modulate အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ပြုပြင်နေစဉ်အတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှကူညီသည်။
ဟော်မုန်း-modulated ဆဲလ်အသေခံ (ကြွက်မူလတန်းအမြင်အာရုံ cortex ၏ volume ထဲမှာလိင်ကွဲပြားမှုများ၏ postnatal ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပေါ်လာသောNunez et al ။ , 2001; Nunez et al ။ , 2002) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမြင်အာရုံ cortex အတွက်ဆဲလ်အရေအတွက်အမျိုးသမီးကြွက်များထက်အထီးအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသည်နှင့်ဤအမျိုးသမီးအတွက်အစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းဆဲလ်သေမင်း၏ သာ. ကြီးမြတ်နှုန်းထားများကြောင့်ဖြစ်သည်။ Prepubertal ovariectomy အမြင်အာရုံ cortex အတွက်ဆဲလ်အသေခံမြှင့်တင်ရန်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းသရုပ်ဆောင်သောသားအိမ်ဟော်မုန်းကိုညွှန်း, လူကြီးအတွက်အာရုံခံဆဲလျအရေအတွက်လိင်ခြားနားချက် abolishes ။
Testicular ဟော်မုန်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုစဉ်အတွင်းအဖြူကိစ္စ volume ထဲမှာအပြောင်းအလဲများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ လူ့ဦးနှောက်၏ imaging လေ့လာမှုများ (ထိုပြောင်းလဲမှုနှုန်းသည်နှင့်ယေဘုယျအသံအတိုးအကျယ်မိန်းကလေးတွေထက်ယောက်ျားလေးတွေအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအဖြူကိစ္စ volume ထဲမှာ linear တိုးထုတ်ဖေါ်Giedd et al ။ , 1999; Lenroot နှင့် Giedd, 2006) ။ ယောက်ျားများတွင်အဖြူကိစ္စ volume ထဲမှာအသီးအနှံကိုမကြာသေးမီက testosterone ဟော်မုန်းအန်ဒရိုဂျင် receptor (AR) လှုပ်ရှားမှု (ချိတ်ဆက်ထားသည်Perrin et al ။ , 2008) ။ အဖြူရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးတိုင်းတာခဲ့တော်မူသောအချို့ AR မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုလျော့ကျရာ CAG ကို repeat ၏မြင့်မားသောအရေအတွက်ကအတူတစ် AR မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲဆောင်သွားကြ၏။ ဒီလေ့လာမှုက testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် AR ၏ပိုပြီးထိရောက်ပုံစံနှင့်အတူယောက်ျားလေးများအတွက်အဖြူကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အကြားပိုမိုအားကောင်းအပြုသဘောဆက်စပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အန်ဒရိုဂျင် receptor function ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲအာရုံကြောဂီယာနှင့် conduction အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အထူးသ, testosterone ဟော်မုန်း myelination axon caliber တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မအဖြူရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ပုံပေါ် (Perrin et al ။ , 2008).
ဒါဟာဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းကိုတိုက်ရိုက်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မ pubertal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းအပေါ်ကဥပမာကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းလည်းသွယ်ဝိုက်လူမှုရေး interaction ကများနှင့်အတွေ့အကြုံပြောင်းလဲအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ အတွေ့အကြုံကိုဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစွမ်းထက် shaper ဖြစ်ပြီးဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံကြောင်းတူညီသောယန္တရားများအများအပြားများမှတဆင့်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဤအပိုင်းကိုတှငျကြှနျုပျတို့ဟော်မုန်း-မှီခိုနှင့်အာရုံကြောဆားကစ်၏အတှေ့အကွုံ-မှီခိုအဖွဲ့အစည်းယန္တရားနှိုင်းယှဉ်။
တချို့ကအတွေ့အကြုံများတဲ့မျိုးစိတ်အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များမှဘုံဖြစ်ကြောင်းနှင့်မျိုးစိတ်ပြောင်းလဲခဲ့သည့်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်. အာရုံခံသတင်းအချက်အလက်ပေး။ ( "အတှေ့အကွုံ-မျှော်" ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်, အတွေ့အကြုံမှာမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်နှင့်သင့်လျော်သောနှင့်သပ္ပါယ်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အချိန်ကာလအတွင်းကြုံတွေ့ရဦးမည်Greenough et al ။ , 1987) ။ အတှေ့အကွုံ-မျှော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဥပမာ (အမြင်အာရုံ cortex ၏သငျ့လျြောသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလင်းနှင့်အမြင်အာရုံပုံစံများမှထိတွေ့မှုများ၏လိုအပ်ချက်များပါဝင်သည်Borg နဲ့ Berry ဟာ, 1978; Timney et al ။ , 1978), နှင့်သာမန်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အထူးသဖြင့်တစ်ဦးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအချိန်တွင်ဘာသာစကားမှထိတွေ့မှုများ၏လိုအပ်ချက် (Fromkin et al ။ , 1974; Kenneally et al ။ , 1998) ။ အာရုံကြောပုံစံများအတော်များများအတွေ့အကြုံကို-မျှော်ပုံစံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးကြီးသောကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်း, overproduced synapses နှင့်သက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆားကစ်၏ခိုင်မာ (၏တက်ကြွဖျက်သိမ်းရေးသို့မဟုတ်တံစဉ်များကိုတဆင့်ပေါ်ထွန်းBlack နဲ့ Greenough, 1997; Greenough et al ။ , 1987) ။ တစ်လောကလုံးဖြစ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံများမှမတူဘဲ, အတွေ့အကြုံအချို့အမျိုးအစားများကိုတစ်ဦးချင်းမှအထူးသဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် "အတွေ့အကြုံကို-မှီခို" ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖျန်ဖြေ (Greenough et al ။ , 1987) ။ အတှေ့အကွုံ-မှီခိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတသေချာပေါက်အရေးပါသောကာလအတွင်းရာအရပျကို ယူ. , အသစ်သော synapses တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အသက်တာ၌သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ရပ်များမှတုန့်ပြန်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်မထားဘူး။ အတှေ့အကွုံအားဖြင့် activated နှင့်ခိုင်ခံ့စေ၏ဖြစ်ကြောင်း Synaptic ဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်တဲ့အာရုံကြောဆားကစ်သို့ပေါင်းစည်းနေကြသည်။
ဟော်မုန်းထိတွေ့မှု၏အချိန်ကိုက်နှင့်ငွေပမာဏကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးသည်အလွန်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလူမှုရေးအတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေသည့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အပေါ် Pubertal ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိအတွေ့အကြုံကို-မှီခိုဖှံ့ဖွိုးတိုးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ် gonadal ဟော်မုန်း Secret အတွက် pubertal တိုး၏အချိန်ကိုက်လူကြီးအတွက်လူမှုရေးအပြုအမူတွေ၏စကားရပ်သြဇာလွှမ်းမိုးတဲ့ variable ကိုကြောင်းပြသထားတယ်။ လူမှုရေးအတွေ့အကြုံသည်ဤစမ်းသပ်ချက်များတွင်ခြယ်လှယ်မခံသောကြောင့်ထို့ပြင်ဟော်မုန်း၏ဤသြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဦးနှောက်ထဲမှာတိုက်ရိုက်ဟော်မုန်းအရေးယူမှုကနေတဆင့်ဖြစ်ရပါမည်။ လူ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်း, သို့သော်, လူမှုရေးအတွေ့အကြုံအတွက်ဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အပြောင်းအလဲအတွက်အပြောင်းအလဲ concomitant ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်အပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ဟော်မုန်း၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လွှမ်းမိုးမှုထွက်ခွဲစိတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ စမ်းသပ်မှုတွေအဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်စတင်ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလူမှုရေးအတွေ့အကြုံအထီးဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် pubertal testosterone ဟော်မုန်း၏မရှိခြင်း၏ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ ameliorate နိုင်ခြင်းရှိမရှိမေးခဲ့တယ်။
ဟမ်းစတားအသက်သုံးပတ်မှာအပျိုဖော်ဝင်မတိုင်မီ gonadectomized ခဲ့ကြသည်။ အသက်4နှင့် 8 ရက်သတ္တပတ်များအကြား, အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ကာလအတွင်းဘာသာရပ်တစ်ခုခုပေးထားထပ်ခါတလဲလဲခဲ့ကြသည် (3x / တပတ်) 15-မိသည် non-အဆက်အသွယ် estradiol- မှထိတွေ့မှုများနှင့်တစ်ကွက် box ထဲမှာပူးတွဲအဓိကချို့ယွင်း-ရစေတယ်အမျိုးသမီး (+ မဟုတ် ,) အမျိုးသမီးတစ်ဦးအချည်းနှီးသောကွက် box ကို (+ box ကို mesh မဟုတ်), သို့မဟုတ်လုံးဝမအတွေ့အကြုံကို (မ + O) မှထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်။ အတှေ့အကွုံထိန်းသိမ်းရေးအသက် 8 ရက်သတ္တပတ်မှာရပ်စဲ, ပြီးတော့အသက် 11 ရက်သတ္တပတ် (7 ရက်သတ္တပတ် Post-gonadectomy) မှာခံခဲ့ရသည်, ရှိသမျှဘာသာရပ်များတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူအပြုအမူစမ်းသပ်မှုမှကြိုတင်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အရေပြားအောက်ဆုံး testosterone ဟော်မုန်း implants ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များဤ3အုပ်စုများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပျိုဖော်ဝင် (T) ကိုစဉ်အတွင်း endogenous testosterone ဟော်မုန်းကြုံတွေ့ကြောင်းယောက်ျားတစ်စတုတ္ထအုပ်စုတစ်စု၏နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ဒီအုပ်စုထဲမှာယောက်ျားလေးအရွယ်ရောက်အဖြစ် gonadectomized ခဲ့ကြသည်, Post-gonadectomy ခုနစ်ခုရက်သတ္တပတ် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးလက်ခံရရှိနှင့်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်တစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်း estrous အမျိုးသမီးမှမယောက်ျား၏ non-အဆက်အသွယ်ထိတွေ့မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိင်အင်္ဂါဖြီးလိမ်းပုံနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အပါအဝင်အများအပြားမျိုးဆက်ပွားအပြုအမူတွေ, ပြန်၏။ သုတ်ရည်လွှတ်နံပါတ် (ပုံ 5) နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်အမျိုးသမီးနဲ့ T အထီး + မပေးအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြဘမှာ T ကိုအုပျစု (မ + O ထက်ပိုသုက်ခဲ့ရပြီးကွက်သေတ္တာအုပ်စုများ + မပေးပုံ 5) ။ ဤစမ်းသပ်မှုတွင် implants မှထုတ်လုပ်သော plasma testosterone ဟော်မုန်းပမာဏသည် NoT + အမျိုးသမီးတိရိစ္ဆာန်များ (2.82 ± 0.36 ng / ml, p <0.038) နှင့် T အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် NoT + အမျိုးသမီးတိရိစ္ဆာန်များမှာမမျှော်လင့်ဘဲနိမ့်ကျခဲ့သည်။ (3.86 ± 0.17 ng / ml) ။ NoT + အမျိုးသမီးသတ္တဝါများရှိ T အဆင့်များသည် T အုပ်စု၏လက္ခဏာများနှင့်ဆင်တူပါကသူတို့၏အပြုအမူသည် T အုပ်စုနှင့် ပို၍ တူနိုင်ပြီး NoT + Øနှင့် NoT + ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှုမှရလဒ်များအရဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်အမျိုးသမီးအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အပျိုဖော်ဝင် testosterone ဟော်မုန်းမရှိခြင်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျော်ကြေးပေးနိုင်သည်။ အပျိုဖော်ဝင်ဟော်မုန်းများနှင့်အတွေ့အကြုံသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောအာရုံကြောဝါးမျိုခြင်းကိုအားဖြည့်ရန်အတွက်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ pubertal testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ejaculatory အပြုအမူ restores ။ အပျိုဖော်ဝင်အပြုသဘောထက်သိသိသာသာနည်းပါးလာသုက်ပြသမတိုင်မီလူမှုရေးအတွေ့အကြုံမရှိခြင်းအတွက်, (GDX) gonodectomized ကူထီး ...
ဤတွင်ကျနော်တို့ကဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းအားဖြင့်တစ်စက္ကန့်အချိန်ဖွဲ့စည်းကြောင်းအထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် pubertal ဟော်မုန်းများကမိတ်လိုက်အပြုအမူများ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအဖှဲ့အစညျးမှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်တဲ့ discrete အထိခိုက်မခံကာလအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ addressing ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးမီစမ်းသပ်မှုဖော်ပြထား စတင်ခြင်းနှင့်အသီးသီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ထေ။ ကျနော်တို့အထီးမိတ်လိုက်အပြုအမူ၏ testosterone ဟော်မုန်း-မှီခိုအဖှဲ့အစညျးအတှကျအထိခိုက်မခံကာလကျွန်ုပ်တို့၏ "အစောပိုင်း-အပျိုဖော်ဝင်" testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုချက်ချင်းယေဘုယျအား postnatal နေ့၌ perinatal ကာလ၏အဆုံးမှတ်ကိုလက်ခံအောက်ပါအစပျိုးခဲ့ပေးထားသည့်မွေးကင်းစကလေးများကာလကနေသီးခြားဖွယ်ရှိမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ 10 ထိရောက်စွာအရွယ်ရောက်အပြုအမူစည်းရုံး။ ဤရွေ့ကားဒေတာ Steroid တစ်မျိုးလုပ်ဆောင်ချက်စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများယန္တရားများ၏ဂန္ထဝင်အမြင်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြီးနောက်အဆုံးသတ်ကြောင်း Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းများကအထီးမိတ်လိုက်အပြုအမူများ၏အဖွဲ့အစည်း postnatal sensitivity ကိုလျော့ကျလာတစ်ခုတိုးချဲ့ဝင်းဒိုးကိုထည့်သွင်းဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်းညွှန်ပြ။
Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသက်ရောက်မှု၏ဂန္ထဝင်အမြင်၏တည်းဖြတ်မူသေချာပေါက်အသစ်သောမေးခွန်းများကိုစေပါတယ်။ အဆိုပါဂန္အမြင်တွင်သားအိမ်ဟော်မုန်းကဦးနှောက်နှင့်အမူအကျင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမအခန်းကဏ္ဍ, ဒါပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားတွေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသားအိမ်ဟော်မုန်းထိတွေ့အပြီးအပိုင်အမျိုးသမီး၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအပြုအမူပွောငျးလဲကြောင်းစုဆောင်းနေပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုသေးကိုမသိရအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးအပြုအမူတွေကိုအပြုအမူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကအစောပိုင်းကသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအချိန်အချက်များမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ discrete ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအထိခိုက်မခံကာလအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်, ဒါမှမဟုတ်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုအဖှဲ့အစညျး၏အထိခိုက်မခံကာလစည်းမျဉ်းကိုနားလည်ခြင်းသည်အလွန် (မိန်းကလေးတွေအတွက် pubertal စတင်ခြင်းမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာချီတက်တော်မူကြောင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်အချိန်မီမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်အစောပိုင်းသို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်း pubertal စတင်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်မိဘ et al ။ , 2003).
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောဧရိယာလူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေအပြုအမူအပေါ် gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေပေးသောအားဖြင့်ယန္တယားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့လူမှုရေးအတွေ့အကြုံများလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများအရွယ်ရောက်ပြီးသူအပြုအမူတွေ၏သင့်လျော်သော display ကိုခွင့်ပြုမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း rewired နှင့်ဒဏ်ငွေ-ညှိထားတဲ့တူညီတဲ့အာရုံကြောဆားကစ် modulate စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း gonadal ဟော်မုန်း၏မရှိခြင်းအားဖြင့်သွေးဆောင်သည့်အမူအကျင့်လိုငွေပြမှု ameliorate ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများနှင့် pubertal ဟော်မုန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်စုစည်းဖို့အပြန်အလှန်အရာအားဖြင့်အာရုံကြောယန္တရားများကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစအတွေ့အကြုံနှင့် pubertal ဟော်မုန်းတွေဖြစ်တဲ့ကျူးကျော်များနှင့်မိဘ၏အပြုအမူအဖြစ်လူမှုရေးအပြုအမူတွေ၏အခြားအမျိုးအစားများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့အပြန်အလှန်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်အသီးအနှံများဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တာတူညီ, ကွဲပြားခြားနားချက်နှင့်အဖှဲ့အစညျး၏ perinatal နှင့် peripubertal ကာလအကြားဆက်ဆံရေးဟာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာယောက်ျားလေးနှစ်ဦး-ဇာတ်စင်အဖွဲ့အစည်းက testosterone ဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုမွငျ့မားဖြစ်လာကြောင်းအသက်တာ၌နှစ်ကြိမ်တစ် function ကိုကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံရသည်။ ထို့အပွငျ testosterone ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးလုံးကြိမ်အတွင်းအာရုံကြောဆားကစ် masculinize နှင့် defeminize မှပေါ်လာသည်။ ထိုအရိုအသေထဲမှာ, perinatal နှင့် peripubertal ကာလဆင်တူသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သူတို့ perinatally ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဖြစ်ထားပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်, သားအိမ်ဟော်မုန်း perinatal အဖွဲ့အစည်းကနေစဉ်အတွင်းထက်အမျိုးသမီး peripubertal အဖွဲ့အစည်းကနေစဉ်အတွင်းပိုကြီးတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပေါ်လာအဖြစ် testosterone ဟော်မုန်း၏အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစထိုဂျင်နှစ်မျိုးလုံးလုပ်ရပ်များ, peripubertal အဖွဲ့အစည်းကနေစဉ်အတွင်းကစားမှာဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိကဒီတစ်ကြိမ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး ။ လူသားတွေအတွက်အပျိုဖော်ဝင် precedes ရာ adrenarche စဉ်အတွင်း adrenal steroids ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍသည်လည်းအကြီးအကျယ် unexplored ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ perinatal နှင့် peripubertal ကာလအကြားနောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ခြားနားချက်အနည်းဆုံးအထီးမိတ်လိုက်အပြုအမူများ၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်, နေရာယူကြောင်းအဖှဲ့အစညျး၏ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုအဖွဲ့အစည်း sensitivity အဖှဲ့အစညျး၏ perinatal ကာလဖွဲ့စည်းသောဆားကစ်၏အနာဂတ်ပျော့နှင့် plasticity လျော့ကျစေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖွယ်ရှိသည်ဖြစ်သောအစောပိုင်း postnatal အသက်, စဉ်အတွင်းထက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလျော့နည်းသည်။ perinatal နှင့် pubertal ဟော်မုန်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphisms ပနျးပုထုထားတဲ့မှတဆင့်ယန္တရားများအတွက်အရည်အသွေးကွာခြားချက်, ဥပမာရှိ, မရှိကိုဤအရေအတွက်ခြားနားချက်, တဘက်, ဆဲလ်ပြန့်ပွား, ဆဲလ်ရှင်သန်မှု, ဆဲလ် phenotype, ဆက်သွယ်မှု၏မော်ဂျူရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ဟော်မုန်း-မှီခိုအဖှဲ့အစညျး၏ perinatal နှင့် peripubertal ကာလအကြားဆက်ဆံရေးစမ်းသပ်လေ့လာမှုအခြေတည်ဖြစ်သော်လည်းကအဖှဲ့အစညျး၏ perinatal ကာလ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ကနဦးဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းအဆုံးအဖြတ်အသုံးပြုပုံ peripubertal ဟော်မုန်းလည်ပတ်ရာအတွင်း parameters များကိုသတ်မှတ်ဆိုဘေးကင်းလုံခြုံပုံရသည် နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလာရန်သည်အဘယ်အရာ foreshadows ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါအလုပျ R01-MH068764, T32-MH070343, NIH F31-MH070125 နှင့် NIH F32-MH068975 ကထောက်ခံခဲ့သည်။
et al Ahmed က EI ။ Pubertal ဟော်မုန်းလိင် dimorphic ဦးနှောက်ဒေသများအသစ်ဆဲလ်များ၏ထို့အပြင် modulate ။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 995-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အာနိုးက AP, Breedlove သည် SM ။ ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူအပေါ်လိင် steroids ၏စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသက်ရောက်မှု: တစ် reanalysis ။ Horm ပြုမူနေ။ 1985; 19: 469-98 ။ [PubMed]
Baum MJ ။ နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက် coital အပြုအမူများ၏ကွဲပြားခြားနားမှု: တစ်နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1979; 3: 265-284 ။ [PubMed]
et al Biehl MC ။ အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံသောက်ဘယ်နေရာတွေမှာအပေါ် pubertal အချိန်ကိုက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 2007; 36: 153-167 ။
et al Bischof HJ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Imprint များအတွက်အထိခိုက်မခံကာလ၏ကန့်သတ်မှု: အမြင်းကျား Finch (Taeniopygia guttata) အပြုအမူဦးနှောက်သုတေသနအတွက် neuroanatomical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်ချက်။ 2002; 133: 317-322 ။ [PubMed]
Bischof HJ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Imprint ၏အာရုံကြောယန္တရားများ။ တိရိစ္ဆာန်ဇီဝဗေဒ။ 2003; 53: 89-112 ။
Bischof HJ ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအထိခိုက်မခံကာလအမူအကျင့်များနှင့်အာရုံခံရှုထောင့်။ Neuroreport ။ 2007; 18: 461-465 ။ [PubMed]
Black က je, Greenough WT ။ ဘယ်လိုဦးနှောက်တည်ဆောက်ရန်: အကွိမျမြားစှာမှတျဉာဏျစနစ်များကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီးသူတို့ထဲကမှသာအချို့တည်ဆောက်ဖြစ်ကြသည်။ အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1997; 20: 558- + ။
et al Bloch GJ ။ အမျိုးသမီးကြွက်၏ Prepubertal testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု: လူကြီးအတွက်အမူအကျင့်များနှင့် endocrine function ကို၏ defeminization ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1995; 19: 177-86 ။ [PubMed]
Borg က S, Rat ၏ Visual-Cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်အမှောင်စောငျ့ရှောကျ၏ Berry ဟာအမ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ်။ 1978; 180: 277-300 ။ [PubMed]
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် T က, အထီးကြွက်၏ Slob အေ Peripubertal သင်း, အရွယ်ရောက်ပြီးသူလွင်ပြင်လူနာတင်ကားများနှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုအပြုအမူ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 1988; 30: 111-117 ။ [PubMed]
et al Bratberg GH ။ ရိပ်မိ pubertal အချိန်ကိုက်, pubertal status ကိုစောစောနှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်၏ပျံ့နှံ့: 8950 နျောယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏လူဦးရေကိုအခြေခံပြီးလေ့လာမှု။ Acta Paediatrica ။ 2007; 96: 292-295 ။ [PubMed]
et al Burt လုပ် SA ။ မီးယပ်စချိန်နှင့်အမူအကျင့်ရောဂါ၏ဇစ်မြစ်၏အချိန်ကိုက်။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 2006; 63: 890-896 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cavanagh SE ။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မိန်းကလေးငယ်များများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်: အဆိုပါပြိုင်ပွဲ၏လမ်းဆုံ, pubertal အချိန်ကိုက်များနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအုပ်စုတစ်စုဝိသေသလက္ခဏာများ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်။ 2004; 14: 285-312 ။
Celio M က, et al ။ ပြန်လည်သုံးသပ်: ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များအတွက်ကျူးကျော်များနှင့်သက်ငယ်ပြစ်မှုတွေအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်အစောပိုင်းရငျ့။ လက်တွေ့အလေ့အကျင့်၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 2006; 60: 1254-1262 ။ [PubMed]
Clemens LG က, Gladue BA ဘွဲ့။ အန်ဒရိုဂျင်မွှေးကြိုင်၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်တားစီးနေဖြင့်တိုးမြှင့်ကြွက်များတွင်ဣတ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ။ 1978; 11: 190-201 ။ [PubMed]
et al Coniglio LP သို့။ အမျိုးသမီးရွှေကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception များ၏ဖိနှိပ်မှုအတွက်ဟော်မုန်းသတ်မှတ်ချက်။ J ကို Endocrinol ။ 1973; 57: 55-61 ။ [PubMed]
Coniglio LP သို့ Clemens LG က။ ရွှေကြွက်များတွင် testosterone ဟော်မုန်းများကအမူအကျင့်ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့လုပျသငျလွယ်ကူစွာထိခိုက်၏ကာလ။ Horm ပြုမူနေ။ 1976; 7: 267-282 ။ [PubMed]
et al Jong FH, က de ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အမျိုးမျိုးသောအဆင့်စဉ်အတွင်းဟော်မုန်းကုသမှုပြီးနောက်လိင်အပြုအမူနှင့်အမျိုးသမီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်။ Horm ပြုမူနေ။ 1988; 22: 100-15 ။ [PubMed]
Dubas JS ။ သိမှုစွမ်းရည်များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့။ ခုနှစ်တွင်: Petersen AC အ, Brooks-ဂွန် J ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏စွယ်စုံကျမ်း။ ပန်းကုံးထုတ်ဝေရေး; နယူးယောက်, NY: 1991 ။ စစ။ 133-138 ။
ကလေးမွေးဖွားမှာ castrated အထီးဟမ်းစတားများ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူရိုးရိုးအမူအကျင့်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း propionate ၏တစ်ခုတည်း prepubertal ဆေးထိုး၏ Eaton G. အ Effect ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1970; 87: 934-40 ။ [PubMed]
Eichmann က F, Holst DV ။ အထီးသစ်ပင် shrews အတွက်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းအားဖြင့်နယ်မြေ marking အပြုအမူများအဖွဲ့။ Physiol ပြုမူနေ။ 1999; 65: 785-91 ။ [PubMed]
et al field EF ။ မွေးကင်းစကလေးနှင့် pubertal မဟုတ်ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူ, သားအိမ် steroids တစ်အစားအစာကို item ကာကွယ်ပေးရန် dodging ၏အမျိုးသမီး-ပုံမှန်ပုံစံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004; 118: 1293-1304 ။ [PubMed]
Fromkin V ကို, et al ။ Genie အတွက်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - ဝေဖန်ကာလကျော်လွန်ပြီးဘာသာစကားသင်ယူမှု၏ဖြစ်ရပ်။ ဦး နှောက်နှင့်ဘာသာစကား။ 1974; 1: 81-107 ။
et al Ge X ကို။ Pubertal အကူးအပြောင်း, စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက်ကျားမကွဲပြားမှုများပေါ်ပေါက်လာ။ dev Psychol ။ 2001; 37: 404-17 ။ [PubMed]
et al Ge XJ ။ deviant သက်တူရွယ်တူဆက်နွယ်မှုနှင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်ကလေးငယ်များအကြား externalizing အပြုအမူအပေါ် pubertal အကူးအပြောင်းသက်ရောက်မှု၏ Contextual amplification ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2002; 38: 42-54 ။ [PubMed]
et al Ge XJ ။ ဒါဟာအချိန်ကိုက်နှင့်အပြောင်းအလဲအကြောင်းကိုင်: အာဖရိကန်အမေရိကန်လူငယ်များအကြားအဓိကစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ် Pubertal အကူးအပြောင်းဆိုးကျိုးများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2003; 39: 430-439 ။ [PubMed]
et al Giedd ဖြစ်မှု။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ နတ် neuroscience ။ 1999; 2: 861-3 ။ [PubMed]
Graber ဂျေအေ။ အခြေအနေတွင်အပျိုဖော်ဝင်။ ခုနှစ်တွင်: Hayward ကို C, အယ်ဒီတာ။ အပျိုဖော်ဝင်စမှာကျားကွာခြားချက်များ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2003 ။
et al Graber ဂျာ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးအတွက် psychopathology နှင့်ဆက်စပ် pubertal အချိန်ကိုက်ဖြစ်သနည်း ကလေးအမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2004; 43: 718-726 ။ [PubMed]
et al Greenough WT ။ အတွေ့အကြုံနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု။ ကလေးသူငယ် Dev မှ။ 1987; 58: 539-59 ။ [PubMed]
et al Halpern မှန် CT ။ ရိပ်မိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်, ရင်ခုန်စရာ partner ၏အသက်အရွယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်အပြုအမူ။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသိပ္ပံ။ 2007; 8: 1-10 ။ [PubMed]
et al Hebbard PC ကို။ အထီးကြွက်များတွင် pubertal testosterone ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးနှစ်စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှု: ယာယီလူမှုရေး memory နဲ့ hippocampal CA1 အတွက်မေးခိုင်အောက်ပါကွာရေရှည်အလားအလာကနေပြောင်းကုန်ပြီ။ Exp Neurol ။ 2003; 182: 470-5 ။ [PubMed]
Hensch TK ။ အရေးပါသောကာလစည်းမျဉ်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2004; 27: 549-579 ။ [PubMed]
Hier DB, Crowley WF ။ , အန်ဒရိုဂျင်-လစ်လပ်အမျိုးသားများတွင် Jr Spatial စွမ်းရည်။ N ကို Engl J ကို Med ။ 1982; 306: 1202-5 ။ [PubMed]
Huck UW, et al ။ Seminatural အခြေအနေများတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်ကျွေးသောရွှေ Hamsters (Mesocricetus-Auratus) တွင်လူမှု - ကြီးစိုးမှုနှင့်မျိုးဆက်ပွားအောင်မြင်မှု။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1988; 44: 313-319 ။ [PubMed]
et al Kaltiala-Heino R ကို။ အစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်ခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်စိတ်ကျန်းမာရေးပြmentalနာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည် လူမှုရေးသိပ္ပံ & ဆေးပညာ။ 2003; 57: 1055-1064 ။ [PubMed]
et al Kenneally သည် SM ။ အထီးကျန်သုံးဆယ်နှစ်ကြာဘာသာစကားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု: တစ်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ကလေးတစ်ဦးအမှုလေ့လာမှု။ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုများနှင့် Developmental မသန်မစွမ်းအတွက်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး။ 1998; 33: 13-23 ။
Knudsen EI ။ ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထိခိုက်မခံကာလ။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004; 16: 1412-1425 ။ [PubMed]
Lenroot RK, Giedd ဖြစ်မှု။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: ခန္ဓာဗေဒသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2006; 30: 718-29 ။ [PubMed]
Lumia တစ်ဦးက, et al ။ မွေးကင်းစကလေးနှင့် prepubertally bulbectomized နှင့် castrated အထီးတက်လာတယ်, ၏အပြုအမူ marking နှင့်ရန်လိုအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1977; 91: 1377-89 ။
McCabe အမတ် Ricciardelli LA က။ သက်တမ်းတစ်လျှောက်အမျိုးသားများအကြားခန္ဓာကိုယ်၏ပုံရိပ်မကျေနပ်မှု - အတိတ်စာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Psychosomatic သုတေသနဂျာနယ်။ 2004; 56: 675-685 ။ [PubMed]
et al Michaud PA ဆိုပြီး။ ဆွစ်ဇာလန်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အမျိုးသားရေးနမူနာအတွက် pubertal အချိန်ကိုက်၏ကျား-related စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့် Correlate ။ မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2006; 254: 172-178 ။ [PubMed]
Mueller SC, et al ။ အစောပိုင်းအန်ဒရိုဂျင်ထိတွေ့မွေးရာပါ adrenal hyperplasia (CAH) Psychoneuroendocrinology အတွက် Spatial သိမှတ်ခံစားမှု modulates ။ 2008; 33: 973-80 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Nunez JL ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင် posterior cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် cell အသေခံ။ J ကို comp Neurol ။ 2001; 436: 32-41 ။ [PubMed]
et al Nunez JL ။ postnatal နေ့က 20 ပြီးနောက်သားအိမ်ဟော်မုန်းကြွက်မူလတန်းအမြင်အာရုံ cortex အတွက်အာရုံခံဆဲလျအရေအတွက်ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ J ကို Neurobiol ။ 2002; 52: 312-21 ။ [PubMed]
မိဘ et al, AS ။ သာမန်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ precocity ၏အသက်ကန့်သတ်ခြင်း၏အချိန်ကိုက်: ကမ္ဘာတဝှမ်းအပြောင်းအလဲတွေဟာ, လောကခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက်အပြောင်းအလဲများကို။ endocrine ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2003; 24: 668-693 ။ [PubMed]
et al Paup DC က။ အန်ဒရိုဂျင်သို့မဟုတ်အီစရိုဂျင်နှင့်အတူမွေးကင်းစကလေးများကုသမှုအားဖြင့်အမျိုးသမီးရွှေကြွက်၏ပုလ်။ Horm ပြုမူနေ။ 1972; 3: 123-31 ။ [PubMed]
Payne AP, Swanson နာရီ။ တစ်ဦးကြားနေလေ့လာရေးဧရိယာထဲမှာအတူတူပင်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ဟမ်းစတား၏စွမ်းအကြား Agonistic အပြုအမူ။ အပြုအမူ။ 1970; 36: 259 ။ [PubMed]
Pellis သည် SM ။ ကစားတိုက်ပွဲများအတွင်းလိင်ကွဲပြားမှု revisited: ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၏ရိုးရာနှင့် nontraditional ယန္တရားများ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2002; 31: 17-26 ။ [PubMed]
et al Perrin JS ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာအဖြူရောင်အမှုကြီးထွား: Testosterone နဲ့အန်ဒရိုဂျင် receptor ၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 9519-24 ။ [PubMed]
Phoenix မြို့, C, et al ။ အမျိုးသမီး guinea ဝက်အတွက်မိတ်လိုက်အပြုအမူဖြန်ဖြေတစ်သျှူးအပေါ်မွေးဖွားမီအုပ်ချုပ် testosterone ဟော်မုန်း propionate ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု Organizing ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1959; 65: 369-382 ။ [PubMed]
လေ RJ, Kellogg CK ။ Pubertal-related အပြောင်းအလဲများကိုယောက်ျားကြွက်များတွင်ပတ်ဝန်းကျင်-related လူမှုရေးအပြန်အလှန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ dev Psychobiol ။ 1989; 22: 633-43 ။ [PubMed]
လေ R ကို, Kellogg C. Gonadal ဟော်မုန်းအပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းအထီးကြွက်များတွင်ပတ်ဝန်းကျင်-related လူမှုရေးအပြန်အလှန်စည်းရုံး။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 1990; 24: 311-323 ။ [PubMed]
လေ RJ, Kellogg CK ။ Gonadal အခြေအနေနှင့် pubertal အသက်အရွယ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအထီးကြွက်များတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိန်ခေါ်မှုဖို့ benzodiazepine / ဂါဘမြို့သားအဲဒီ receptor ရှုပ်ထွေးသော၏တုန့်ပြန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 561: 299-306 ။ [PubMed]
et al Schulz KM ။ Gonadal ဟော်မုန်းယောက်ျားဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းမျိုးဆက်ပွားအပြုအမူတွေ masculinize နှင့် defeminize ။ Horm ပြုမူနေ။ 2004a; 45: 242-249 ။ [PubMed]
et al Schulz KM ။ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း defeminize အမျိုးသမီး lordosis အပြုအမူသားအိမ်ဟော်မုန်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ, Vol များအတွက် Society က။ Program ကိုအမှတ် 538.20 ။ စိတ္တဇ Viewer ကို / ခရီးစဉ်အစီအစဉျ။ အွန်လိုင်း; San Diego မှ, CA. 2004b ။
Schulz KM, Sisk CL ။ Pubertal ဟော်မုန်းသည်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူများ၏ရငျ့: ဆီးရီးယားဟမ်းစတားကနေသင်ခန်းစာ။ Mol ဆဲလ် Endocrinol ။ 2006: 254-255 ။ 120-6 ။ [PubMed]
et al Schulz KM ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Testicular ဟော်မုန်းထိတွေ့မှုကတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက် binding ခြမ်း-marking အပြုအမူနှင့် vasopressin အဲဒီ receptor စည်းရုံး။ Horm ပြုမူနေ။ 2006a; 50: 477-83 ။ [PubMed]
et al Schulz KM ။ Estradiol အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း lordosis အပြုအမူ defeminizes ။ အပြုအမူ Neuroendocrinology များအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း; Pittsburg, PA ဆိုပြီး။ 2006b ။
et al Schulz KM ။ testosterone အစီအစဉ်များလူမှုရေးအပြုအမူမီနှင့်ကာလအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ဒါပေမယ့်ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာမဟုတ်ပြီးနောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al ဖြစ်သူ Scott JP ။ စနစ်များ၏အဖှဲ့အစညျးမှာအရေးပါကာလ။ dev Psychobiol ။ 1974; 7: 489-513 ။ [PubMed]
Shrenker P ကို, et al ။ DBA / 1Bg ကြွက်တွေမှာလိင် dimorphic အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် postnatal testosterone ဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Physiol ပြုမူနေ။ 1985; 35: 757-62 ။ [PubMed]
et al Sisk CL ။ အပျိုဖော်ဝင်စ: အထီးလူမှုရေးအပြုအမူများအတွက်တစ်ဦးပြီးကျောင်းတွင်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2003; 1007: 189-198 ။ [PubMed]
Sisk CL, Zehr JL ။ Pubertal ဟော်မုန်းဟာဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူစည်းရုံး။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2005; 26: 163-74 ။ [PubMed]
Stewart က J ကို, Cygan ဃသားအိမ်ဟော်မုန်းကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Open-လယ်ကွင်းအပြုအမူ feminize စောစောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 1980; 14: 20-32 ။ [PubMed]
et al Striegel-Moore က RH အ။ မီးယပ်စချိန်၏အချိန်ကိုက်အကြားဆက်ဆံရေး Exploring နှင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များအတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေအစာစားခြင်း။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2001; 30: 421-433 ။ [PubMed]
et al Swithers SE ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ဖက်တီးအက်ဆစ်ဓာတ်တိုးမြားတှငျပွောငျးလဲတုံ့ပြန်စားသုံးမိ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သားအိမ်ဟော်မုန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Horm ပြုမူနေ။ 2008; 54: 471-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာသားရေလုပ်သမားဂျေကြီးထွား။ Blakwell သိပ္ပံ; အောက်စဖို့ဒ: 1962 ။
Timney B, et al ။ အမှောင်စောငျ့ရှောကျ၏တိုးချဲ့ကာလပြီးနောက်ကြောင်အတွက်မျှော်မှန်းချက်များဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ စမ်းသပ်ဆဲဦးနှောက်သုတေသန။ 1978; 31: 547-560 ။ [PubMed]
ဝေါ်လဲန် K ကို Baum MJ ။ Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းလုပ်ဆောင်ချက်နှိုင်းယှဉ်ရှုထောင့်: altricial ငျနှငျ့ ပတျသကျ. နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်ပုလ်နှင့် defeminization ။ ခုနှစ်တွင်: ။ et al Pfaff DW, အယ်ဒီတာများ။ ဟော်မုန်း, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ။ Elsevier; 2002 ။ စစ။ 385-423 ။
et al Zehr JL ။ အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏ pubertal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်း medial amygdala ၏ Dendritic တံစဉ်များကို။ J ကို Neurobiol ။ 2006; 66: 578-90 ။ [PubMed]
et al Zehr JL ။ ဘွဲ့ကြိုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏လူဦးရေအတွက် disorders စားခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူအစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်တစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2007a; 52 (4): 427-35 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Zehr JL ။ ဘွဲ့ကြိုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏လူဦးရေအတွက် disorders စားခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူအစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်တစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2007b Doi: 10.1016 / j.yhbeh.2007.06.005 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]